Uvavanyo luka-Eminem 'lokuBulawa nguKuhlaziya': Yintoni ebesiyilindele? - Umculo
Ingxoxo enengqiqo malunga ne-Eminem kunye 'noMculo oza kubulawa'
URob Harvilla: Ingxolo enkulu oyivileyo ngolwesiHlanu ekuseni, u-Justin, yayisisandi samawakawaka abahleli bezenkcubeko begcuma kunye xa beva ukuba uEminem wothukile-wehla i-albhamu entsha, Umculo oza kubulawa , kwaye ewe, mhlawumbi ubungadingi ukuba ndikuxelele lonto, njengoko ndiqinisekile ukuba nawe uyancwina. Umculo oza kubulawa ngenene iphefumlelwe nguAlfred Hitchcock, aka Malume Alfred, kwaye kumdla wokuqalisa ngento elungileyo, le vidiyo yesibini-yesibini ka-Em engena kumfanekiso ophakathi ngomnwe ophakathi we-Hitchcockian silhouette ngokunyaniseka iyahlekisa, kwaye imnandi kakhulu kunayo nantoni na eyenzeka kwi-albhamu eyure-kunye-nde Ukukhuthaza, kwaye ewe, uxolo, oku kuguquke kwaba yinto engalunganga.
Le mivalo yenzelwe kuphela iimela ezibukhali kwidrowa #MusicToBeMurderedBy https://t.co/q4TAFJUVGV pic.twitter.com/qA9A3LiYYI
-Marshall Mathers (@Eminem) NgoJanuwari 17, 2020
Imixholo kule rekhodi ibandakanya ukungathembeki (pro), utata kaEminem (anti), ukusetyenziswa gwenxa kweziyobisi (zombini pro kunye anti), strippers (pro ngokwasemzimbeni kodwa ngokuchasene nokomoya), kunye neengcinga zikaEminem kubuchule bakhe bokudlwengula (pro) xa kuthelekiswa nomnye umntu ( anti). Kwinto eyaba sisiko elingcwalisiweyo, ukhalaza malunga nokuvavanywa okungalunganga okuphefumlelwe nguye yangaphambili I-albhamu entsha emangazayo, ehlotyeni ngo-2018 Kamikaze , kwaye ngokwenene impendulo yam endiyithandayo kule albhamu intsha ukuza kuthi ga ngoku umsonto we-Twitter ye Amatye agiqekayo abahleli bezama ukuqonda ukuba kutheni uEm ecaphukile ngesiquphe malunga ne-33-yeminyaka ubudala RS uphononongo lweLL Cool J's Enkulu kunye neDefer leyo ayikho nakwi-intanethi.
Ndiyamisa kuba andifuni ukuthetha ngobumnyama, Umculo oza kubulawa 'S lead single, nangona yenzelwe ukuba ibe kuphela kwento umntu athetha ngayo. Ubumnyama buqhutywa kukungena kancinci kunye nokuziphatha okuhle kukaSimon & Garfunkel Isandi Sokuthula, kwaye ikhutshiwe ngokwembono yesidubuli. Ngokukodwa, i-mass shooter ngo-2017 eyabulala abantu abangama-58 UMthendeleko wokuVuna weNdlela 91 e Las Vegas.
Ukuphonononga jesus christ superstar live
U-Em ubuncinci uzenza ngathi, kwiivesi zakhe zokuqala, ukuba oku akucaci kwangoko, ukuba ubetha nje eqongeni emva kovalo, abafaki-mbini abavela kuFuck the Colt 45, Ndifuna somethin 'onamandla kuTywala ukuphefumla kwam njengoko ndifikelela kwinqanaba lokuba nditshixiwe kwaye ndilayishwe ngokukhawuleza komlilo 'kubo bonke ababenekhonsathi. Ke ukudubula kunye nokumemeza kunye neendaba-zeendaba-zokunika ingxelo ziqala, kwaye ubumnyama buziveza njengolawulo lokuziphatha kompu lokudlala, ngokubaluleke, akukho mgaqo:
Kodwa ukuba ungathanda ukwazi unobangela wokuba ndenze le nto
Awusoze ufumane injongo, inyani andinalwazi
Ndikhubekile, akukho zimpawu zokugula ngengqondo
Zama nje ukubonisa isizathu sokuba kutheni sithandana kangaka
’Kuba ngelixesha kugqityiwe, ngekhe wenze umahluko omncinci
Emva koko uEm-as-the-shooter uyazibulala. Ividiyo yobumnyama iphela ngesibheno esithe ngqo sokubhalisela ukuvota ukuze wenze ilizwi lakho livakale kwaye uncede ukutshintsha imithetho yemipu eMelika; Iwebhusayithi ka-Eminem amakhonkco kulawulo lwemipu eyahlukeneyo kunye neewebhusayithi zokukhuthaza amaxhoba. Kodwa amava apheleleyo oBumnyama, i-queasy quasi-Hitchcockian fakeout yayo yonke, ayinakukunceda kodwa uzive uxhaphaza kwaye ugcwele: i-shrug emoji exhobele emazinyweni. Ke uyithathe njani? Wothuka? Ihanjisiwe? Yotyiwe? Udiniwe? Ngaba esi senzo sikubetha kwanentsingiselo ukuba incinci (okanye ininzi) ayisebenzi, okanye ngaba uyanyathela nje?
UJustin Sayles: URob, lo mhleli wenkcubeko uphelile kwaye umda wecala ukhubekisile ukuba uEminem wakhupha uHitchcock ngenxa yemigangatho yakhe ye-slasher-flick-grade. Phantse iminyaka engama-20 idlulile ukusukela kumncinci (kodwa ayisiyiyo yonke loo nto incinci) uSlim Shady wasebenzisa uColumbine ngokudubula njengepunch line Ndibuyile. Makube lee kum ukuthi abantu, nditsho nombhali we Yilahle nje, ayinakukhula kule minyaka ingamashumi amabini, kodwa kunzima ukuthatha ubumnyama ngokungathi yi-PSA xa edlwengula kamva, ndinguSanta Fe, eMandalay, naseOrlando, naseColorado, kunye neColumbine / Zonke zidityanisiwe zaba nye. Ikwakhupha umngxunya nje ngenxa yexesha: Ukhuphe ii-albhamu ezimbini phakathi kwe-Okthobha ye-2017 eLas Vegas yokudubula kunye Umculo oza kubulawa . Kutheni usenza le ngoma ngoku? Ngaba ukukhathalele ngokwenene? Ndiyathandabuza. Ukubeka ubumnyama njengesixhobo esichasene nobundlobongela eskrelekrele siziva ngathi yicompon ethandabuzekayo, ngokungathi wayefunda inombolo yomnxeba wobundlobongela basekhaya kwiKim.
Ndiza kuvavanywa ukuba nditsho ukuba le vidiyo yayililinge lokuphelisa nayiphi na impikiswano enokubakho ukuba wayengathandani nayo kwenye indawo Umculo oza kubulawa . Kwangoko kwi-albhamu, kwi-Young M.A- incedisiwe Ukuhlala , U-Eminem wenza ireferensi kwibhombu yekonsathi ye-Ariana Grande eManchester, eyabulala abantu abangama-23 kubandakanya nomenzi wobubi. Ulungile ukubamba umva , kodwa yeyiphi enye into ebuyela emva kwikhondo elizele ngabo? Yonke into esuka ekubulaweni kukaSharon Tate ukuya kuRichard Ramirez ngumdlalo olungileyo ku-Em. (Yiba nombulelo akukho UChristopher Reeves izingqinisiso ngeli xesha.)
Ke: Ngaba le iya kuba ngamava kaMarshall Mather okwexesha lonke? Kwiminyaka emithathu, ngaba u-Eminem oneminyaka engama-50 ubudala usaya kwenza amahlaya kaJonBenét Ramsey?
Zithini iingoma eziculwa ngudrake
IHarvilla: Ewe, umgca waseSanta Fe –Mandalay-Orlando-Colorado-Columbine kuxa ndicinezele eyona inzima. Kuza kuYah Yah, ukusika okunzulu okumela okona kulungileyo Umculo oza kubulawa Kufuneka anikezele, kwaye eneneni imele imeko yeplato yamava kaMarshall Mathers ngalo lonke ixesha, kuba kukuguga nje kodwa oseneziphiwo zokurepha iesile lakhe (ngesiqhelo) iipali ezinesiphiwo esikhulu. (URoyce Da 5'9, Black Thought, Q-Tip, kunye noDenaun, kule meko.) UYah Yah ulusizi kwaye uyarhabaxa kwaye uyinto eyoyikisayo kwaye akenzi kuvunyelwana nomculo we-rap ngenkulungwane yama-21, kwaye ndiyawuthanda kanye ukuya kuthi ga kwinqanaba apho u-Em eqala ukubuyisa ububi benkohlakalo.
Ukukhubekiswa kancinci ngumgca we-Eminem ngo-2020 kuya kuxhokonxwa / kukotywa / kukoyisiswe kwelokulibala; ukuphinda ubuye eMandalay akuphazamisi ezona zinto zingathandekiyo zingama-200 azithethileyo nakwiminyaka eli-10 edlulileyo. Ndingowokufa kunokudubula , ewe, ndidiniwe rap-braggadocio boilerplate. Kodwa xa unikwe ubumnyama bokwakha, uluvo nje lokuba unento ethile ebalulekileyo ayithethileyo ngayo nayiphi na le nto, kuyothusa kakhulu ukujonga njengoko uEm esusa amashumi amabini eminyaka yeentlekele zesizwe ngaphandle kokuqonda kwaye akukho nto enokuthelekisa ezo iintlekele ezingezizo ezakhe.
Ndingathanda kakhulu ukuqaphela Umculo oza kubulawa Njengobunye nje ubuyatha kodwa obungenabungozi ekuhambeni kwe-Eminem, ukuqhekeza kuhlala kuyinto entle okanye ubuncinci kwaye ngesatya esikhulu , ukuzingca kuhlala kusisidenge kakhulu ukuya kuthi ga kwinqanaba elinomdla. (Ndiyayixabisa, njengomthonyama nowaseOhio ngoku, umtya we-Ohio-based puns ukhutshiwe kwi-Ed Sheeran-incedise i-stripper jam Abo Kinda Nights -Sifanele ukuba yi-datin '/ Uvela eCleveland / Kodwa uyi-Bengal / Le ntshontsho li-catty-kodwa inyani kukuba i-Kinda Nights ngu-Ed Sheeran-uncedise ijipper jam.) Ihlabathi lifuna indawo ekhuselekileyo apho uJoell Ortiz anakho yenza i Intlanzi ebizwa ngokuba yiWanda Isalathiso, okanye ubuncinci uJoell Ortiz uyenza, kwaye ndingubani mna ukuba ndingachasa? Kodwa inyani kukuba i-Eminem ayinanto yakuthetha ngobomi ngo-2020 kwaye iya inyamezeleka kokukhona inyanzelisa ukuba iyenze. Ubuncinci uyekile ukuzama ukunyathela uTrump. (Okwangoku.)
U-Eminem Ubenobusuku obubalaseleyo baseMelika iminyaka engama-20
Sihlala kwi-White America yase-Eminem
Inyaniso engathandekiyo yeyokuba ezona albhamu zenziwe ziiRappers zeXesha elithile kule minyaka mihlanu idlulileyo- iJay-Z's 4:44 okanye iTribe ebizwa ngokuba yi-Quest Siyifumene Ukusuka Apha ... Enkosi ngenkonzo yakho , umzekelo-ngokukodwa zithwelwe ngumothuko, okanye ubuncinci intlekele yoluntu andingekhe ndiyinqwenele nakubani na, nanini na. Iingcambu ze-Eminem ukuba iphinde ibaluleke kwakhona yingcambu yento eyoyikisayo eyenzekayo, kuye buqu ukuba ayinguye wonke umntu. Ubumnyama bubonakala ngathi buyayiqonda le nto, kodwa ekuphumezeni kukwabonisa ngamandla ukuba uzicombulule kakhulu ukuba angawenza nawuphi na umsebenzi ikamva lethu le-dystopi elinokumenzela lona. (Ayilotyala lika-Em, ubulumko bamaxesha oshishino, kodwa Ukubulala yenza umahluko owoyikekayo emva kokubhubha kukaMac Miller Isangqa , ikhutshwe nangoLwesihlanu, kwaye ithenda kwaye inovelwano njengo Ukubulala ngumnxeba kunye nobutshaba.)
Nzeni wena ufuna u-Eminem ngoku? Ufuna ntoni umntu? Inokuba yeyiphi 4:44 kulingana nokujonga okanye ukuvakala ngathi? Ngaba sizibeka emngciphekweni wokucinga ngosuku oluzayo oloyikeka kangangokuba sifuna uMarshall Mathers ukuba alugcine?
Isixhobo: Mnu.Ohio, siyavumelana ukuba elona candelo lilungileyo Umculo oza kubulawa Ngu , Ngaphandle kwale migca ichazwe apha ngasentla, nguYah Yah, obandakanya ukuCinga okuMnyama ukunyathela kwivesi, URoyce ehambisa zombini iDas EFX kunye noJuelz Santana, kunye nesampulu evela kuWoo Hah !! Ngaba Unayo Yonke Ekukhangeleni eyenza ukuba le ngoma iphantse ibe yinto efana ne-Busta Rhymes yasekuqaleni. Iphakamisa umbuzo wokuba kutheni uEminem engazange azame ukubuyela kwi-albhamu esekwe phambili ebhalisa abavelisi beGolden Age kunye neempawu, kwaye kwenza ukungabikho kweShady Records signees eGriselda kutshanje kuyothusa. (Nangona ithwala ukukhankanya ukubonakala kwegunya lika-Em eGriselda's Bang (Remix) Kunyaka ophelileyo ndizive ndingekho kwenye i-albhamu ebalaseleyo, ebandayo yesitalato-rap.)
Inxalenye yam iyamangalisa, nangona kunjalo, ukuba nabani na ongaphandle kweLacrosse Bros angayamkela iprojekthi apho i-Eminem igcwele Rap uThixo . Ukhuphe iialbham ezintathu ukusukela ngoDisemba 2017, kodwa akukho ngoma okanye ndinyana ayibhalileyo ngelo xesha limchaze kakhulu uChris D'Elia usebenzisa ii-napkin ezininzi iparody, eguqule i-punch line master enye ngokusemthethweni ukuba ibe ngumgca wepunch. Kukwakho nenyaniso yokuba bonke ubuchwephesha bobuchwephesha bunokuba nengcinezelo: Bekukho abavakalisi abambalwa abakwaziyo ukugoba iisilabhasi kunye nezikimu ezinemvano-siphelo kwintando yabo njengo-Eminem, kodwa ngo-2020, usebenzisa ezo zakhono njengebhrashi enkulu kakhulu kwisikrufu, ejikeleza ngaphandle kweenjongo kwaye ehluthula isinyithi. Rob, ixesha lam elininzi ndimamele Umculo oza kubulawa , Ndive ngathi sisikrufu.
Uluvo luka-Eminem lokwenza 4:44 inomdla, kodwa ngaba kunokwenzeka ukuba yenzeke? Inxalenye yento eyenze ukuba i-Jay-Z's mea culpa ibe yimpumelelo yayingumngcipheko wakhe. UJay wavula malunga nokusilela kwakhe njengendoda kunye nobomi bakhe bonke. Kwakunjengokuluhlaza njengoko wayekhe wakwenza kwi-wax, kodwa bekukho amaxesha angaphambili kwikhathalogu yakhe, njenge Kufuneka Undithande okanye iingoma ezithile kwezimbini zokuqala Iimpawu , yenziwe 4:44 ndiziva ngathi yinto yendalo. Andiqinisekanga ukuba u-Eminem ukhe wamyekisa ngokupheleleyo ukulinda (nangona kufuneka ndivume ukutsiba uninzi lwazo Ukuchacha kwaye Buyela umva ; Ndandingenguye umhleli wenkcubeko ngoko, ndimangalele). Ngokuqinisekileyo, uqhubekeke nokunxunguphala okuninzi kumagama akhe, kodwa Utata wesibini Kubonakala ngathi akabonakalisi ukuqhubela phambili ngaphaya kwamaphupha okubulala nokuziphindezela. Ungaze Uphinde Uthande , oqhayisa ngemveliso ekhumbuza umsebenzi we-No 4:44 , uziva unzulu ekuqaleni, kodwa ekugqibeleni uzityhila ingomnye umgangatho wenqanaba lomzabalazo ka-Em wokulutha. I-albhamu emnandi yokwenyani ye-Eminem iya kubambana nento ayenzileyo kunye nendawo yakhe kwimbali yomculo, kodwa ngaba ufuna ukuyenza loo nto? Ubonakala ngathi unomdla (okanye into efana nayo) ekhalaza malunga nokuphononongwa okungalunganga kunye noMatshini Gun Kelly.
Kodwa, Rob, ngumsebenzi wethu ukucinga ngezi zinto. Inyani yile, Umculo oza kubulawa Ngokuqinisekileyo ngokuqinisekileyo iya kuqala. 1 phambili kweMac Miller. U-Em ungumculi we-niche okwangoku, nangona ingxolo enkulu eya kuthi ngovuyo ithathe ikhefu ekukhaleni ngaphezulu kwe-Xbox Live ukusikhwaza ngento esiyithethileyo apha. Ndicinga ukuba umbuzo wam ngulo, ngaba i-Eminem ibalulekile kwingqondo ephambili ngeli xesha, okanye kubalandeli bayo nakuthi, abantu ababelwe ukubhala ngezi ntlobo zezinto? Kwaye wayethetha ukuthini?
colin kaepernick into yokumiswa
IHarvilla: Kuyamangalisa ukuba ukuba kukho nantoni na, u-Eminem ngaphantsi Okwangoku njengamandla aqhelekileyo: Nini Umculo oza kubulawa iitshathi ziya kuba yakhe ye-10 ngokulandelelana. 1 ukuqala , Ukophula irekhodi lexesha lonke. Ngoku ubotshiwe, u-Kanye West, oziva ngokuqinisekileyo, u-e-apt: Ayikhathali into yokuba bathini abagxeki malunga nala ma dudes nokuba kukwiprojekthi-nge-projekthi okanye kwi-macro Ngaba le nto iyabaluleka . Amanani awaxoki; Iiyunithi ezingama-325,000 ezilingana ne-albhamu azinakuba ziphosakele. Ke yintoni le ayibonayo imikhosi yakhe yeengoma ezibalaseleyo kwaye ayive kwaye ayive ngathi kuthi sonke?
Mhlawumbi ukuba semngciphekweni kokukhusela abagcini, nangona andinakukufumana ngokwam kule rekhodi. Umgca ngathi ndithengisa njenge-4 mil 'xa ndikhupha i-albhamu embi / Imvuselelo I-flopped, yabuya, ndaza ndoyika ukuba i-crap out 'em i-theory ihlaziya kwi-candor yayo: Kukho ukulawulwa komgangatho apha, ukuqonda okuthile ukuba abantu bahlala bethenga (okanye ubuncinci ukusasaza) kungakhathaliseki ukuba uthengisa ntoni. Kodwa ulungile ukuba kuphela umahluko okhoyo ngokweemvakalelo phakathi kuka-Eminem oneminyaka engama-27 ubudala kunye no-Eminem oneminyaka engama-47 ubunzulu bobukrakra kunye nenqanaba lelungelo. (Igama elithile ilungelo elimhlophe ngokwenene iyavela Ukubulala , kodwa iingcinga zakhe azikhanyisi.)
Owona mngcipheko ndikhe ndive kuwo u-Eminem ubuyile e2017 xa wayezama, kwaye esilela, ukuqala idangatye lomlo noTrump: Njengoko uEm uxelele Ixhalanga NguDavid Marchese , Ndifuna ukuba andiphendule kuba ndinemibono yazo zonke iintlobo zekitshi zokuba ndibuyele kuye ukuba uyayenza. Ukuba unganxibanga nceda-ukhubeke-ngam-ukuphelelwa lithemba, ngelixa kunjalo kumbindi we-brand ye-Eminem kwasekuqaleni, sisihogo sento kuye ukuba ayichaze, kakuhle, ze. Ndixolile kakhulu ukuba imfazwe yasebukhosini ayenzekanga. (Ukanti.) Kodwa iyaqinisa umbono wokuba uEm kuphela ngokusemandleni akhe xa efumene utshaba olufanelekileyo, kwaye ubambekile kumjikelo wokuvutha ngumsindo ngaphandle komnye.
Enye indlela yokuchaza amava okuphila ngo-2020 kukuba kufana nokuhlala kwingoma engapheliyo ye-Eminem: ubushushu, ukunyelisa, ukuphelelwa lithemba, ukungcikivwa, i-megalomania yokuzikhusela, amaza angenakulinganiswa okugweba ulwazi. Ngokuqinisekileyo sihlala kwihlabathi awalincedayo ukuba lakhe, kwaye ndiyakwazi ukuyixabisa iinzame zakhe, nkqu nakwiingoma ezinobungozi ezinje ngoBumnyama, ukuqaphela nayiphi na loo nto. Kodwa ngayo yonke imbeko efanelekileyo kulawo ma-325,000 alinganayo kwi-albhamu, ukuba kuyinyani ukuba lihlabathi le-Eminem kwaye sihlala kulo, sifuna ntoni enye i-albhamu ye-Eminem?
idemarco murray okanye todd gurley
amatye angapheliyo ngokulandelelana
singabanini bemovie yasebusuku